တရုတ်နယ်စပ်တွင် မြန်မာ GSM နှင့်CDMA ဖုန်များ ဆက်သွယ်၍ မရ ~ TA'ANG LAND
Welcome to contact with maistrong01@gmail.com
Background of Ta'ang
Background of TSYO
DEMONSTRATING ABOUT THE TA'ANG PEOPLE AND TA'ANG LAND
Ta'ang National Flag
King Of Ta'ang
Ta'ang Martyr Stately Building
Monopoly Tea Farms
Lightless Life ( English vision )
Virus of Tea (လက်ဖက်ဖျက်ပိုး)
Find more music like this on My.EnglishClub.com
နမ့်ဆန်မြို့နယ်မှ မြေဧက ရာပေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းခံ...
ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်၏ မြေသိမ်းမည့်ကိစ္စ နမ့်ခမ်းဒေသခံမ...
တအာင်းအမျိုးသားပါတီ လူထုအတွက် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမျ...
ပလောင်အမျိုးသမီးငယ်အား နအဖစစ်သား အုပ်စုလိုက်မုဒိမ်...
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများပြားသည်အမျှ ရပ်ရွာထဲတွင် ...
အလုပ်လက်မဲ့ ပလောင်လူငယ်များရွာလုံးကျွတ် တရုတ်နယ်စပ...
တရုတ်(၅)ဦးမှ ပလောင်မိန်းကလေးတစ်ဦးအား အုပ်စုလိုက်...
တရုတ်နယ်စပ်တွင် မြန်မာ GSM နှင့်CDMA ဖုန်များ ဆက်သ...
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဘိန်းတောင်သူများထံမှ ရဲ ငွေတောင်း...
စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် မီးသွေးကုန်သည်များနှင့် အလု...
သျှမ်းပြည် (ရှမ်းပြည်) အမျိုးသားနေ့ အကြောင်း သိကော...
Ta'ang Background (11)
Ta'ang Culture and literature (10)
Ta'ang Culture Dress (1)
Ta'ang Culture Video (18)
Ta'ang news (170)
Ta'ang Poem (33)
Ta'ang Tea (9)
Ta'ang VCD (8)
Ta'ang in China (တအာင်းဂေါ်ည်းကီုင်းခယ် )
Ta'ang Students & Youth Organization (တအာင်းကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး)
Ta'ang Forum ( တအာင်းဆုံရပ် )
PNS -J (ဂျပန်ရောက်တအာင်း)
တရုတ်နယ်စပ်တွင် မြန်မာ GSM နှင့်CDMA ဖုန်များ ဆက်သွယ်၍ မရ
Posted by ဆန၀်းနော;မှေဲမ်း on 11:07:00 PM
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ရောက် မြန်မာများသုံးစွဲနေသည့် မြန်မာ GSM နှင့်CDMA ဖုန်းများသည် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပ နေသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ရက်ပိုင်းအလိုကစ၍ ဆက်သွယ် ခေါ်ယူ၍ မရတော့ကြောင်းသိရသည်။
လွတ်တော်အစည်းအဝေး မကျင်းပမီ ဂျန္နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ခန့်ကစ၍ ယနေ့အထိ အဆိုပါဖုန်းလှိုင်းများလုံးဝနီးပါး ပြတ်တောက်နေကြောင်း ရွှေလီရှိ မြန်မာဖုန်းအငှား ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
“ရွှေလီမှာ သုံးနေတဲ့ မြန်မာ GSM နဲ့ CDMA ဖုန်း အတော်များများပေါ့နော် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် သောကြာနေ့ လောက်က စပြီး ဒီနေ့အထိ လှိုင်းတွေပြတ်နေတာ။ အခုကျတော့ ည ၈ နာရီကျော်လောက်ဆို တစ်ချက်တစ်ချက်ရတယ် ” ဟု သူက ပြောသည်။
တရုတ်နယ်စပ်တွင် မြန်မာဖုန်းလှိုင်းများဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲနေကြောင်း ရွှေလီရှိ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
“သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်လို့ ဖုန်းလှိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်ထင်တယ်။ ဆက်သွယ်လို့မရဘူး ဒီမှာတော့ အားလုံးလို လို ဖြစ်နေတာပဲ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိဘူး။ ဆက်သွယ်လို့ ရတယ်။ ဒီရွှေလီက ဖုန်းကို မြန်မာပြည် တွင်းကနေ ခေါ်ရင် စက်ပိတ်ထား တယ်လို့ ပြောတယ်။ အမှန်က ဒီမှာမပိတ်ထားဘူး ဒီကခေါ်လဲ ခေါ်လို့ကိုမရတာ” ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
နေပြည်တော် လွတ်တော်အစည်းအဝေးကြောင့် နယ်စပ်ရှိဖုန်းလှိုင်းများ အဝင်ရော အထွက်ပါ ဖြတ်တောက်ထားခြင်း ဖြစ် ဖွယ်ရှိကြောင်း မြန်မာဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများက ယူဆကြသည်။
တရုတ်နယ်စပ်တွင် ယခင်နှစ်ပိုင်းအတွင်းက မြန်မာဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ အနည်းအကျဉ်းသာရှိသော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ဖုန်းကိုင်သူ များပြားလာကြောင်း သိရသည်။
ရွှေလီတွင် ပြည်တွင်းမှ မြန်မာလူငယ်များ ကြုံရာကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ယခင်ကထက် သိသိသာသာ တိုးလာရာ မြန်မာဖုန်းအငှားဆိုင်များ အမြောက်အများ ပေါ်လာသည့် အပြင် ယခင်ထက် ဖုန်းဈေးကျ၍ ဝယ်ယူရ လွယ်ကူလာသဖြင့် စီးပွားရေး အခြေကျသည့် မြန်မာလုပ်ငန်း ရှင်များ ကလည်း ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ များပြားလာကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ရွှေလီနှင့် ကျယ်ခေါင်မြို့များတွင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းနှင့် ၅ သိန်းတန် နေပြည်တော် GSM ဖုန်း အပါအဝင် နေပြည်တော်၊ မန္တလေး ၊ လားရှိုးနှင့် မူစယ် CDMA ဖုန်းများ ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲသူ ဦးရေ ရာကြီးပိုင်းအထိရှိကြောင်း သိရသည်။
RADIO ( ရေဒီယိုအစီအစဉ် )
computer -ict (ကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းနည်းပညာ)
Golden Dream Movies (အိပ်မက်များ)
US Movies ( အမေရိကန် )
Korean Movies ( ကိုးရီးယား )
Khayan Pyar (ခရမ်းပြာများ )
Youth Diary Movies ( လူငယ်ဒိုင်ယာရီ )
shanhumanright(ရှမ်းလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ )
against the ditatorship
WE CAN READ NEWS ALL OF THE WORLD
sportnews ( အားကစား )
Thailand news (ထိုင်းသတင်း )
Ta'ang Culture & Literature Flag
Obelisk of Ta'ang
My 1st Album
Betway Slots FOOTBALL Fulltiltpoker Casino
TA'ANG VIDEO (တအာင်းရိုးရာများ)
karaoke (မြန်မာကာရာအိုကေသီချင်းများ )
Decisions. intentions , plan
Speaking , vocabulary. grammar
English Grammar with exercise
Go to Elementary Level
Myanmar - English Practice
www.aungsan.com ( ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း )
www.dassk.com ( အောင်ဆန်းစု့ကည် )
Eng = Myan (dictionary)
TA'ANG LAND © 2010 Design by Free New WP Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes